Inhlalisuthi ishaye intombi emhlophe - Ilanga News
Home Izindaba Inhlalisuthi ishaye intombi emhlophe
Inhlalisuthi ishaye intombi emhlophe
Bese beneminyaka ewu-7 bethandana
UMNU Lindo Ngcobo oyiNazaretha eshada umshado wesintu nentombi emhlophe, uNkk Roxy Ngcobo, uMaCameron eChibini eMaqongqo izolo ngeSonto.
KUGQAME ubuhle nothando inhlalisuthi yebandla lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, oluholwa yiNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe igiya iqephuza ishaya intombi emhlophe qwa izolo ngeSonto, eMaqongqo, eMgungundlovu.
UMnu Lindo Ngcobo uqophe umlando eganwa yisithandwa sakhe esinguNkk Roxy Ngcobo, uMaCameron waseDundee abesebeneminyaka ewu-7 bethandana. Kuthiwa bekungokokuqala kuleli bandla ukuba insizwa ishaya intombi emhlophe qwa ezakubo zibhekile.
Njengoba bekusinwa esigcawini izolo, ngoLwesine lezi zithandani bezishada omhlophe. Kulo mshado wesintu obuwenzelwa kwaNgcobo, bekukhona amaNazaretha, umphakathi, umndeni kamakoti nabangani bakhe bonke abebebukeka bejabulile.
Umakoti kulo mshado ubeyishaye yaphelela imvunulo yesintu waze wafaka ngisho isicholo nesidwaba, umyeni wakhe naye ebhincile ngezesintu. Ngesikhathi sekuphunywa, kuyiwa esigcawini uMnu Ngcobo uqhamuke ephelezelwa yizinsizwa ebezihlobile namadoda endawo, behuba. Bafika esigcawini umakoti nomndeni wakhe sebelindile nebhokisi ebelibekwe phakathi nesigcawu.
Umshado uqale sekugamenxe ihora lokuqala lapho kufike khona iphoyisa lenkosi, uMnu Mqapheli Dlamini obeyiso lenkosi yesizwe, iNkosi Skhosiphi Mdluli.
UMnu Dlamini wenze okujwayelekile uma kugcagcwa ngesiZulu, wabuza kumakoti ukuthi uyamthatha yini umyeni. Lo mbuzo uwubuze kwaba kane, umakoti esatolikelwa ukuthi iphoyisa lithini.
Ubonakele esukuma ngesikade abantu sebemvumela bethi: ‘yes” wayoguqa phambi komyeni elokhu emamatheka, wamnika isambulela esimnyama abesiphethe, wathatha induku ebikuMnu Ngcobo kwaqhuma umkikizo, bashada.
Kuthe kungaqedwa ukwenziwa lokho, uMnu Ngcobo wasukuma wakhuza isaga ethi: “Watheng’ umbhede ungenamfazi uzophekelwa wunyoko yini!”
Ekhuluma naleli phephandaba udadewabo kamakoti, uNkz Geraldine Cameron, uthe udadewabo wahlangana nesithandwa sakhe esasebenza kwadokotela eDundee.
“ULindo ngaleso sikhathi wayesebenza kaMasipala waseDundee, ejwayele ukuya khona eyolanda izinto ezithile wagcina esezibika kuRoxy.
“Esaqala ukumshela, uRoxy wayemxosha engafuni nokuyizwa indaba yakhe kodwa ekugcineni wasitshela ukuthi sebeyathandana. Kwasethusa, kodwa yayingekho into esasingayenza ngoba wayelandela inhliziyo yakhe.
“Sebeneminyaka ewu-7 bethandana bathola abantwana ababili umfana nentombazane,” kusho udadewabo kamakoti.
UNkk Ngcobo ungene emzini nenqwaba yezimpahla phakathi kwazo obekuwumshini wokuwasha, umbhede, isibuko, iwodilophu nosofa bakanokusho.
Previous articleUthola izinsongo obhale ekaMeyiwa
Next articleAkeneme ngezakhe umqeqeshi weChiefs